कसरी गर्ने थ्रिडी मेकअप ? | mulkhabar.com
कसरी गर्ने थ्रिडी मेकअप ?
October 6, 2017 | 8:59 am 277 Hits
अनुहार क्लिन्जिङ गरेर सफा गर्ने । अनुहारमा मोइस्चराइजर लगाउने । अनुहारमा रहेको दाग–धब्बा वा कालो, पोतो भएको ठाउँमा अरेन्ज कन्सिलरले छोप्ने । यसबाट अनुहार न्युट्रिलिजेक आक्सिडिजेड हुँदैन । कन्टोरिङले अनुहारको कुन भागलाई पातलो देखाउने हो त्यहाँ गाढा रंग लगाउने । अनुहारको रंगभन्दा तीन गुणा हल्का रंग लगाउने । अनुहारको छालाबमोजिम फाउन्डेसन लगाउने ।
कन्टोरिङ गर्ने विधि : नाकको दुवैतर्फ गाढा खैरो रंग लगाउने र सीधा भागमा (नाकको) हाइलाइटर लगाउने । यसले नाक सीधा, पातलो र चिटिक्क देखाउँछ ।
थ्रिडी मेकअपले आँखालाई ठूलो र लामो देखाउँछ । आँखामा गाढा र हल्का रंग प्रयोग गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले आइब्रो बोनमा सेतो, गोल्डेन, सिल्भर आदि हल्का रंग लगाउने । यसले आँखाको सुन्दरता बढाउँछ ।
आँखाको आउटर्स कर्नरमा कालो, खैरो, नीलो, हरियो आदि पहिरनसँग म्याच हुने स्याडो लगाउने । इनर कर्नरमा हल्का रंग लगाइदिने । आँखाको क्रिजमा सधैं गाढा म्याट स्याडो लगाउने । दिउँसोको मेकअपमा बिर्सिएर पनि ग्लिटर स्याडो प्रयोग गर्नुहुँदैन । आँखा सानो छ भने गाजल लगाई जेल लाइनर प्रयोग गर्न सकिन्छ । रातिका लागि भने आइबल्समा ग्लिटर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । लामो तथा बाक्लो आइलाइसेस प्रयोग गर्दा आँखा अझ आकर्षक देखिन्छ ।
गालामा कन्टोरिङ गर्ने । यसले गाला पातलो र सही आकारको देखिन्छ । कानको भागबाट नाकको छेउसम्म कन्टोरिङ गर्दै ब्लसेस लगाउने । चिकबोनमा हाइलाइटर साइन लगाउने । जो लाइन कन्टोरिङ गर्दा डबल चिन मज्जाले छोपिन्छ ।
मेकअपको अन्त्यमा पहिरन अनुसार लिपिस्टिक प्रयोग गर्ने । ओठमा थ्रिडीको प्रभाव दिन ओठका कुनाहरूमा गाढा रंगको लिपिस्टिक र बीच भागमा हल्का कलरको लिपिस्टिक लगाउने । थ्रिडी मेकअपको प्रभाव अनुहारको आँखा, नाक, ओठ, गाला, निधार, चिकबोन, आइब्रोज आदि सबैमा देखिन्छ ।
मेटालिक गोल्ड लिप कलर : मेकअपको दुनियाँमा नित्य नयाँ–नयाँ ट्रेन्ड विकसित भैरहेका हुन्छन् । अहिले केही समयदेखि लिप मेकअपमा कपल लिप अर्थात् मेटालिक गोल्ड लिप फेसनमा छ ।